Tag: ihe ize ndụ | Martech Zone
Tag: ihe ize ndụ
E nwere ndị mmadụ n'ofe mba ahụ na-enyo ume ọ hụrụ n'ịhụ Nnyocha Shuttle na-aga nke ọma. Enwere ndị kwenyere na ọtụtụ ijeri dollar ejiri rụọ ọrụ na mbara igwe bụ naanị nnukwu ego. Enweghị m ike ikwenye karịa. Dị ka ọ dị na mbido ọhụụ a, isetịpụ ebumnuche ndị agaghị ekwe omume inweta bụ ihe na-akpali anyị ime ihe ọhụrụ na ọganihu. Mmemme mbara igwe bụ otu n’ime mmemme ndị ahụ